Fanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy ama Wasmo looga duubay Jig jiga . | Kala soco warar Xul ah
Fanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy ama Wasmo looga duubay Jig jiga .
Hayáda Sirdoonka Kililka 5-aad ee Ethiopia ayaa markii ugu horeeysay suuqyada Jigjiga ku daadisay DVD ay ku jiraan Film Sexy laga duubay Fanaanada Falis Cabdi xilli ay kooxda Waayahacusub tageen degaanka Somalida Ethiopia.
Film-ka laga duubay Falis Cabdi ayaa la sheegay inay ka shaqeeyeen Sirdoonka Ethiopia xilli ay booqaneysay Jig Jiga oo ay ka qaaday heeso ay ku caayeen Jabhada Xaq u dirirka ONLF.
Dadka ku nool JIgjiga ayaa Warbaahinta u sheegay in Ismaamulka Kililka 5-aad ee Ethiopia ka xanaaqay Wiil ka tirsan kooxda Waayahacusub oo xafladii Cali Dhaanto ee Nairobi ka shaaciyay inuu raaligelin siinaya Walaalaha Ogadenia .
Digriyoow oo ka hadlay xaflada Cali Dhaanto ayaa yiri ” Anigoo ay i soo wakiisheen kooxda Waayaha cusub waxaan idinka raaligelinayaa qaladkii aan ku kacnay ee Gumeystaha Ethiopia u hoos tagnay”
Sirdoonka Maamulka Kililka 5-aad oo hadalkaas ka carooday ayaa suuqyada ku daadiyay DVD Copies laga sameeyay film laga duubay Falis Cabdi .
Filmka ayaa muujinaya Falis Cabdi oo Sexy la sameeyneyso nin dheer oo xoog weyn ,iyadoo dhinaca kalena laga dhex arkayo gabar adeeg u sameeyneysay Fanaanada iyo Ninka galmada la sameeyay.
Ninka qaba Falis Cabdi oo lagu magacaabo Shiine ayaa Sirdoonka Ethiopia ku eedeeyay inay Xaaskiisa Cabitaan ugu dareen dawada lagu saqraamo.
Shiine wuxuu yiri ” Xaaskeeyga waxaa Casuumay gabdha reer Jigjiga ah kadibna waa la saqraamay oo sidaas ayuu shilkaas foosha xun ku dhacay laakiin Falis waa gabar dhowrsoon oo aan ku tilmaami karo Marwo qaaliya”
Fadeexada Falis Cabdi markii ay ruxday Somalida ku nool Geeska Afrika ayuu Shiine Akhyaar u qaaday hees uu ugu magacdaray Falis Nuura hasse yeeshee heesta waxaa la degay codkiisa oo aan ku wanaagsaneen luuq Fanaan.
Falis kaliya Jigjiga laguma wanjalin waxaana sidoo kale laga duubay Film sexy ah Nimco Dareen iyo Saynab Labadhagax.
Ujeedka Sirdoonka Ethiopia u ceebeeynayaan gabdhaha Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay iyagoo Blackmail gareeynaya ama doonaya inay ceebeeyaan hadii ay siyaasadooda ka boodaan oo ONLF u heesaan.
Kooxda Waayaha cusub oo lumiyay taageeradii bulshada Soomaaliyeed waxay Ethiopia siisay Baasaboor kaas oo laga ceshtay hada,waxa ay ka heleena waa Fadeexada cusub.
Dhalinyaro u dhalatay Ogadeniya ayaa Fanaanka Digriyoow waxay hore ugu garaaceen Nairobi halka Shiine uu Islii uga maato cabsi darteed.
Safaaradda Mareykanka ee Kenya ayaa guno lacageed siiso bil walba Shiine iyo gabadha uu qabo ee Falis Cabdi.
Hayáda Sirdoonka Kililka 5-aad ee Ethiopia ayaa markii ugu horeeysay suuqyada Jigjiga ku daadisay DVD ay ku jiraan Film Sexy laga duubay Fanaanada Falis Cabdi xilli ay kooxda Waayahacusub tageen degaanka Somalida Ethiopia.Film-ka laga duubay Falis Cabdi ayaa la sheegay inay ka shaqeeyeen Sirdoonka Ethiopia xilli ay booqaneysay Jig Jiga oo ay ka qaaday heeso ay ku caayeen Jabhada Xaq u dirirka ONLF.Dadka ku nool JIgjiga ayaa Warbaahinta u sheegay in Ismaamulka Kililka 5-aad ee Ethiopia ka xanaaqay Wiil ka tirsan kooxda Waayahacusub oo xafladii Cali Dhaanto ee Nairobi ka shaaciyay inuu raaligelin siinaya Walaalaha Ogadenia .Digriyoow oo ka hadlay xaflada Cali Dhaanto ayaa yiri ” Anigoo ay i soo wakiisheen kooxda Waayaha cusub waxaan idinka raaligelinayaa qaladkii aan ku kacnay ee Gumeystaha Ethiopia u hoos tagnay”Sirdoonka Maamulka Kililka 5-aad oo hadalkaas ka carooday ayaa suuqyada ku daadiyay DVD Copies laga sameeyay film laga duubay Falis Cabdi .Filmka ayaa muujinaya Falis Cabdi oo Sexy la sameeyneyso nin dheer oo xoog weyn ,iyadoo dhinaca kalena laga dhex arkayo gabar adeeg u sameeyneysay Fanaanada iyo Ninka galmada la sameeyay.Ninka qaba Falis Cabdi oo lagu magacaabo Shiine ayaa Sirdoonka Ethiopia ku eedeeyay inay Xaaskiisa Cabitaan ugu dareen dawada lagu saqraamo.Shiine wuxuu yiri ” Xaaskeeyga waxaa Casuumay gabdha reer Jigjiga ah kadibna waa la saqraamay oo sidaas ayuu shilkaas foosha xun ku dhacay laakiin Falis waa gabar dhowrsoon oo aan ku tilmaami karo Marwo qaaliya”Fadeexada Falis Cabdi markii ay ruxday Somalida ku nool Geeska Afrika ayuu Shiine Akhyaar u qaaday hees uu ugu magacdaray Falis Nuura hasse yeeshee heesta waxaa la degay codkiisa oo aan ku wanaagsaneen luuq Fanaan.Falis kaliya Jigjiga laguma wanjalin waxaana sidoo kale laga duubay Film sexy ah Nimco Dareen iyo Saynab Labadhagax.Ujeedka Sirdoonka Ethiopia u ceebeeynayaan gabdhaha Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay iyagoo Blackmail gareeynaya ama doonaya inay ceebeeyaan hadii ay siyaasadooda ka boodaan oo ONLF u heesaan.Kooxda Waayaha cusub oo lumiyay taageeradii bulshada Soomaaliyeed waxay Ethiopia siisay Baasaboor kaas oo laga ceshtay hada,waxa ay ka heleena waa Fadeexada cusub.Dhalinyaro u dhalatay Ogadeniya ayaa Fanaanka Digriyoow waxay hore ugu garaaceen Nairobi halka Shiine uu Islii uga maato cabsi darteed.Safaaradda Mareykanka ee Kenya ayaa guno lacageed siiso bil walba Shiine iyo gabadha uu qabo ee Falis Cabdi.